पेरीहेलियन र एफेलीयन। सबै कुरा तपाईलाई उनीहरूको बारेमा जान्न आवश्यक छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
पेरीहेलियन र एफेलीयन
पक्कै पनि तिनीहरूले तपाईंलाई asonsतुहरूको कारण बताएका छन्। फरक पृथ्वीको चाल तिनीहरू तापमान र अन्य मौसमविद् र मौसम परिवर्तनहरू वर्षको asonsतुहरू परिवर्तन र परिमार्जनको कारण दिन्छ। पृथ्वीको सूर्यको वरपरको ट्रान्सलेशनल गतिको बखत, यससँग धेरै महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू छन् जुन गर्मी र जाडोमा विलापको कारण हुन्छ। ती बुँदाहरू हुन् परिभ्रमण र एफेलीयन।
यस लेखमा हामी ग्रहका लागि महत्वपूर्ण प्रक्रियाहरूमा एफेलियन र पेरिहेलियनले बिभिन्न कार्यहरू प्रस्तुत गर्न जाँदैछौं। के तपाई यस बारे थप जान्न चाहानुहुन्छ?
1 पृथ्वी सन्तुलन
2 पेरीहेलियन र एफेलीयन प्रक्रियाहरू
3 केपलरको कानून
3.1 पहिलो कानून, अण्डाकार कक्षा
3.2 दोस्रो कानून, क्षेत्रहरूको कानून
3.3 तेस्रो कानून, Harmonic कानून
पृथ्वीको अनुवाद गति एकै समयमा घुमावको रूपमा देखा पर्दछ। त्यो हो, दिन र रातहरू लिने क्रममा पृथ्वी यसको परिभ्रमणको साथ साथ मा मा गति गर्दछ सौर्य प्रणाली सूर्य वरिपरि एक पूर्ण क्रान्ति सम्म। हामी पहिले नै थाहा छ, यो फिर्ती लगभग 365 XNUMX दिन लाग्छ, जुन हाम्रो लागि क्यालेन्डर वर्ष हो.
यस अनुवादित आन्दोलनको क्रममा पृथ्वीले धेरै मुख्य बिन्दुहरू पार गर्दछ जसले पृथ्वीको सन्तुलनलाई मद्दत गर्दछ। यी परिधिहरू र एफिलियन हुन्। यी दुई बुँदाहरू प्राकृतिक विकासमा सटीक सन्तुलन स्थापना गर्न जिम्मेवार छन् जुन ग्रहको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
हामीले परिभाषित गर्ने पहिलो पोइन्ट अफेलियन हुनेछ। यो त्यो बिन्दु हो जहाँ पृथ्वी सूर्यबाट सब भन्दा बढी दूरीमा छ। यो सोच्नु सामान्य धारणा हो कि अधिक दूरीमा अवस्थित हुँदा हामीसँग कम तातो हुने छ र त्यसैले जाडो मौसममा यस्तो हुने गर्दछ। । यद्यपि यो एकदम विपरित हो। जब पृथ्वी एफिलियनको माध्यमबाट जान्छ, यो यात्रा गर्ने गतिमा सब भन्दा ढिलो छ र सूर्यको किरणहरू पृथ्वीमा अधिक लम्ब रूपमा आइपुग्छन्। यो कारण हो गर्मी संक्रांति.
यसको विपरित, जब पृथ्वी परिग्रहमा छ, यो तब हुन्छ जब यो सूर्यको अवस्थामा हुन्छ र यसको वेग बढाउँदछ। यसको अनुवादित आन्दोलनको अधिकतम गति पेरिहेलियनमा हुन्छ। यस बिन्दुको बखत शीतकालीनक्रान्ति र यो चिसो हुनुको कारण सूर्यको किरण उत्तरी गोलार्धमा पुग्ने झुकाव हो।
पेरीहेलियन र एफेलीयन प्रक्रियाहरू
यी दुई पोइन्टको आधारभूत कार्य तापमानको सन्तुलन स्थापना गर्नु हो जुन गर्मी र चिसो बर्षमा घुमाउन अनुमति दिन्छ। पृथ्वीको ऊर्जा सन्तुलन इकोसिस्टम र पारिस्थितिक सन्तुलनको कार्यक्षमता कायम राख्नको लागि महत्वपूर्ण छ। यदि हामी जहिले तातो भण्डार गर्दै थियौं, तापक्रम बढ्न रोक्दैन र ग्रह अनावश्यक हुनेछ। उस्तै कुरा भयो यदि यो विपरित हो भने।
त्यसकारण, ती स्थानहरूको बिन्दुको उपस्थिति आवश्यक छ जसले विभिन्न स्थलीय चरहरूको अस्थिरतामा पहिले र पछिको स्थापना गर्दछ। एपेलियन लाई प्राथमिक बिन्दु मानिन्छ जहाँ ग्रह अनुवाद को गति कम से कम छ। यो एफिलियन जुलाई around को वरपर हुन्छ। Cजब पृथ्वी यस विन्दुमा अवस्थित छ, यो सूर्यबाट १ 152.10२.१० मिलियन किलोमिटर टाढा छ।
यसको विपरित, जब पृथ्वी परिधिमा छ, जनवरी around को वरिपरि हुने प्रक्रिया, जुन यो सूर्यको नजीक हुनेछ। यो जहाँ अवस्थित छ १ 147.09.० million मिलियन किलोमिटर टाढा। यद्यपि यस अवस्थामा हामी सूर्यबाट टाढा छौं, यसको मतलब यो चिसो छ भन्ने होइन। जसरी पृथ्वीमा २l डिग्रीको झुकावको अक्ष छ, उही मौसमहरू सधैं हुँदैन। उत्तरी गोलार्धमा, जाडो डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा हुन्छ। यद्यपि दक्षिणी गोलार्द्धमा यो जुन, जुलाई र अगस्त महिनाहरूमा देखा पर्दछ।
अर्को शब्दहरुमा, जुन महीनहरु हाम्रो लागि तातो छ, दक्षिणी गोलार्धका देशहरू चिसो छन्। यो झुकावको कारणले हो जुन पृथ्वीको सतहमा सूर्यको किरण सूचकांक हो। अधिक झुकाव, चिसो।
केप्लरको कानूनका लागि धन्यवाद, पृथ्वीको कक्षामा यी पोइन्टहरूको कार्य वर्णन गर्न सकिन्छ। जोहान्स केप्लर एक जर्मन खगोलविद् थिए यसले कानूनहरूको एक श्रृंखलालाई जन्म दियो जुन ग्रहहरूको आन्दोलनको समझलाई सजिलो बनाउँदछ। उनले विभिन्न गणनाहरू प्रदर्शन गरे जुन बीचको प्रक्षेप र उनीहरू बीचको भिन्नताहरू थिए।
यी कानूनहरूले ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् र पेरिहेलियन र एफेलीयनको समयमा हुने प्रक्रियाहरूमा धेरै महत्त्वपूर्ण आधारहरू गहिराईमा वर्णन गर्दछन्। हामी केप्लरको तीन कानूनहरूको विश्लेषण गर्न गइरहेका छौं।
पहिलो कानून, अण्डाकार कक्षा
सौर्यमण्डलको ग्रहहरुको कक्षा कोर्डाकार छ। तसर्थ, त्यहाँ यी दुई पोइन्टहरू छन् जुन सूर्यको सम्बन्धमा ग्रहको अधिकतम र न्यूनतम दूरी मार्क गर्दछ।
दोस्रो कानून, क्षेत्रहरूको कानून
यो कानूनले ग्रहको ओर्बिटल गतिलाई जनाउँछ। यसले सूर्यबाट दूरीसँग सम्बन्धित भिन्नताहरू प्रस्तुत गर्दछ। गति अधिकतम परिधिमा र न्यूनतम अफेलियनमा हुन्छ। जब एक ग्रह सूर्यबाट टाढाको बिन्दुमा जान्छ, यसले सार्नको आफ्नो क्षमता गुमाउँछ किनभने गुरुत्वाकर्षण तान्न कम छ। जे होस्, उस्तै उस्तै अनुवाद आन्दोलनलाई सूर्यको निकटता बढी भएको भनि उच्चारण गरीन्छ।
यसले सबै दिन र रातको अवधिमा असर पार्दछ र समय यसले एक चरण र अर्कोमा कम गर्न लिन्छ।
तेस्रो कानून, Harmonic कानून
यो कानून ग्रहहरु को साइडरेल कक्षा को अवधि को ध्यान मा लिन्छ। यो जहाँ सूर्य को औसत दूरी को अनुपात स्थापित छन्। त्यो हो, ग्रहको छेउको काल ताराहरूसँग सापेक्ष मापन गरिन्छ र सूर्यको क्रमिक परिच्छेदहरूको बीचमा बितेको समयद्वारा त्यो ताराले स्थापना गरेको एक प्रकारको मेरिडियनमार्फत मापन गरिन्छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने कुरा, यी बुँदाहरू पृथ्वीको सन्तुलन र वर्षको ofतुहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। म आशा गर्दछु कि यस जानकारीका साथ तपाईं एफेलीयन र पेरिहेलियनको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » पेरीहेलियन र एफेलीयन